मधेसमा बिश्वबिद्यालय स्थापना हुनुपर्छ–चुमनबाबु केवट - KalaiyaLive.Com.Np
मधेसमा बिश्वबिद्यालय स्थापना हुनुपर्छ–चुमनबाबु केवट
By कलैयालाईभ	 On Feb 6, 2013 61 0
मधेस र मधेसीको अधिकार, पहिचान तथा सम्मानको लागि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको उदयसंगै फोरम नेपालको नीति तथा नियम राम्रो लागेर फोरम नेपालमा प्रबेश गर्नुभएका बारा जिल्ला कलैया नगरपालिका–५ पन्नाबाग निवासी चुमनबाबु केवट एक बुद्धिजिविको रुपमा आफ्नो परिचय बनाउँनुभएको छ । फोरम नेपालमा प्रबेश गर्नु अघि स्वतन्त्र रुपमा रहनुभएका केवट बि.सं.२०६० सालदेखी फोरम नेपालमा सक्रिय रुपमा लाग्नुभएको हो । मधेस आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता रहेको केवट बिसं. २०६२ सालमा फोरम नेपालको प्रथम जिल्ला अधिबेशनबाट कोषाध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । फोरम नेपालको जिल्ला कोषाध्यक्षबाट जिल्ला अध्यक्ष हुदै उहाँ अहिले फोरम नेपालको केन्द्रीय सदस्यको रुपमा सक्रिय रुपमा लाग्नुभएको छ । एमबिएस सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएका केवट फोरम नेपाल भित्र एक बुद्धिजिविको रुपमा पनि चिनिनुहुन्छ । मधेस आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता रहेको फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य केवटसंग कलैयालाईका समाचार प्रमुख सुभाषप्रसाद साहले मधेस आन्दोलन भएको छ बर्ष बितिसक्दा मधेस र मधेसीले के पाए ? यसै सेरोफेरोमा रहेर लिएको अन्तरबार्ताको सारसंक्षेपः
कलैयालाईभ ः मधेस र मधेसीको नाममा भएको मधेस आन्दोलन ६ बर्ष भईसक्यो, यस मधेस आन्दोलनबाट आम मधेसीले के पाए ?
केवट मधेस र मधेसीको लागि भएको मधेस आन्दोलन रहरले भएको होईन् । यो आम मधेसीको पहिचान र अधिकारसंग जोडिएकोले मधेस आन्दोलन मधेसीले बाध्यता भएर सडकमा उत्रेका थिए । मधेस आन्दोलनले मधेसीलाई पहिचान र अधिकार दिएको छ । नेपाल पछाडी पारिएको समुदायको रुपमा मधेसीहरु छन् भन्ने कुरा बिदेशलाई चिनाउँने काम मधेस आन्दोलनले गरेको छ । पहिचानबाट बञ्चित पारिएका मधेसीले नेपालका साथै बिदेशमा समेत आफ्नो पहिचान बनाउँन सफल भए । मधेस आन्दोलनले काठमांडौ केन्द्रीत केन्द्रीकृत शासन प्रणालिलाई तोडेर बिकेन्द्रीकरण अर्थात संघियताको खाका कोरेको छ । यो सबै मधेस आन्दोलनले पुरा गरेको छ । यधपी मधेस र मधेसीले पाउँनुपर्ने थुपै्र कुरा पाउँन नसकेको कारण त्यसलाई पुरा गर्न फोरम नेपाल सक्रिय रुपमा मधेस र मधेसीको साथमा रहेर अगाडी बढिरहेको छ ।
कलैयालाईभ ः फोरम नेपाल केमा व्यस्त रहेको छ ?
केवट मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल मधेसको मुद्धा लिएर मधेसको जनतामा जागरुक गर्न लागेको छ । साथै संगठ्नको काम लगायत पहाडमा रहेका जनजाति, आदीबासी, दलित आदीसंग समन्वयात्मक कृयाकलापमा व्यस्त रहेको छ ।
कलैयालाईभ ः मधेसबादी दलको बीचमा एकिकरण हुने हल्ला चलेको थियो, कहाँ सम्म पुगेको छ ?
केवट मधेसबादी राजनीतिक दलको बीचमा एकिकरण गर्ने कुरा हल्ला होईन् । यो सत्य हो । मधेसबादी राजनीतिक दलको बीचमा एकिकरण हुने काम भईरहेको छ । अहिले बार्ता चल्दै छ । मधेसबादी केही दलको बीचमा चाडै एकिकरण हुने सम्भावना देखिन्छ । जस्तै अहिले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीसंग तीन चार चरणको बार्ता भईसकेको छ । साथै आदीबासी जनजातिको पार्टीहरुसंग समेत एकिकरणको बिषयमा बार्ता चलिरहेको छ ।
कलैयालाईभ ः बार्ता धेरै दिन देखी भईरहेको छ, कुरा केमा अडकेको छ ?
केवट बिभिन्न चरणमा हाम्रो बार्ता जारिरहेको छ । बिधान, नीति नियम ईत्यादीमा सहमति हुन बाँकी रहेको छ । तर हामी बीचमा मधेसमा ठुल्लो राजनीतिक दलको रुपमा पार्टीलाई ल्याउँने कुरा भईसकेको छ । स्वायत मधेस एक प्रदेश बनाउँने, अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम लगायतका पछाडी पारिएकाहरुको अधिकार स्थापित गर्ने गराउँने लगायतका बिषयमा सहमति भईसकेको छ । सहमति हुन बाँकी मुद्धाको बिषयमा कुरा मिलाउँन दुईटै दलबाट बार्ता समिति गठ्न गरेर बार्ता जारी रहेको छ ।
कलैयालाईभ ः फोरम नेपाल पनि सरकारमा सामेल हुने चर्चा छ नि ?
केवट फोरम नेपाल पहिला आम मधेसीको अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छ । जुन दलले मधेसको मुद्धामा सहमति जनाउँछ उसंग सरकारमा जानसक्छ । अन्याथा विपक्षी भई आफ्नो काम गर्छ ।
कलैयालाईभ ः मधेसको मागमा सहमती जनाएका अन्य दलसंग मिलेर फोरम नेपाल बिगतको दिनमा सरकारमा सामेल भयो, तर मधेसले त केही पाएनन् ?
केवट पहाडी मानसिक्ता भएका शासक बर्गहरुले मधेसको मुद्धासंग सम्झौता गरे पनि मधेसको माग पुरा नगर्ने उनीहरुको नियत राम्रो नभएको कुरा प्रस्ट नै भईसकेको छ । हुनत फोरम नेपालले सरकारमा रहेरै अहिले मधेसी, दलित, आदीबासी जनजाति, मुस्लिम लगायतले पाउँने सम्पुर्ण सुबिधा तथा कोटा फोरम नेपालकै योग्दानले भएको हो । यधपी मधेस र मधेसीले पाउँनुपर्ने अधिकार र सम्मान पाउँन बाकी रहेकोले फोरम नेपाल त्यसलाई पुरा गर्नको लागि संघर्ष गरिरहेको छ । यस्तै नेपालमा शोषित बर्गको रुपमा रहेका मधेसीलाई बिदेशमा चिनाउँने काम, देशलाई संघिय गणतान्त्रिक देश बनाउँने फोरम नेपाल नै हो ।
कलैयालाईभ ः मधेसबादी राजनीतिक दल पटक पटक फुटनुको कारण के होला ?
केवट मधेसबादी राजनीतिक दलहरु फुटुनुको कारण मध्ये प्रमुख कारण नेताहरुमा अदुरदर्शिता, सत्ताको लोभ र पहाडी शासक बर्गको सडयन्त्रले मधेसबादी राजनीतिक दललाई फुटको दुख भोग्नु परिरहेको छ । त्यसैले मधेस र मधेसीले दुख नपाओस भनेर हामीले मधेसबादी राजनीतिक दलसंग एकिकरणको अभियान चलाएका छौ ।
कलैयालाईभ ः मधेसबादी राजनीतिक दलमा पनि जातिबाद, नाताबाद, कृपाबादले जरा गाडिरहेको छ नि ?
केवट काँग्रेस, एमाले र माओबादी राजनीतिक दलमा यस किसिमको नाताबाद, कृपाबाद, जातिबादको राजनीतिक हुने गर्दछ । मधेसबादी राजनीतिक दल यसको बिरोधमा लडने पार्टी भएकोले यसमा यस किसिमको बिकृतीहरु देखिएको छैन् । फोरम नेपालले मधेसी, दलित, जनजाति आदीबासी लगायत पहाडका पहाडी बर्गलाई समेत समाबेश गराएको पार्टी हो । जस्तै फोरम नेपालमा पहाडी समुदायका वीरेन्द्र प्रधान, अर्जुन थापा, छाया शर्मा लगायतका रहनुभएको छ ।
कलैयालाईभ ः बर्तमान सरकारको कार्यशैलि कस्तो रहेको छ ?
केवट बर्तमान सरकारको कार्यशैलि निरंकुश शासक जस्तो रहेको छ । किनभने देशका जनतालाई शान्ति, संबिधान, बिकाश चाहिएको छ । तर यो सरकारले देशका नागरिकको भावना र मर्मलाई कुल्चेर आफ्नो एकतन्त्रिय शासन लादन खोजेको छ ।
कलैयालाईभ ः तराई मधेसको बिकाश कसरी हुन्छ ?
केवट तराई मधेसको बिकाशको लागि सबैभन्दा पहिला अब बन्ने संबिधानमा मधेसका अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । मधेसका अधिकांश जनताहरु कृषीमा आधारित भएकोले कृषी क्षेत्रको व्यापक बिस्तार हुनुपर्छ । मधेसका जनतालाई शिक्षित पार्न मधेसमा पनि बिश्वबिद्यालय, टेक्निकल कलेज स्थापना हुनुपर्छ । स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई लगायतका क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरी मधेसको भबिष्यका साथै देशको भबिष्य उज्जवल बनाउँन सकिन्छ ।
कलैयालाईभ ः तराई मधेसमा बढदै गएको भ्रष्टाचार, अत्याचार, हत्याहिंसा जस्ता आपराधिक कृयाकलापलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ?
केवट मधेसमा भईरहेका हत्याहिंसा, अराजकता, भ्रटाचार राज्यद्धारा नै सुनिश्चित गरिएको सडयन्त्र जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी पहाडको तुलनामा मधेसमा नै बढी भएको तर पनि मधेसमा यस किसिमको आपराधिक कृयाकलाप बढनु राज्यद्धारा गराईएको सडयन्त्र नै हो भन्ने बुझिन्छ । यस्ता आपराधिक कृयाकलाप रोक्नको लागि देशमा पहिचान सहितको संघियता र संघियता सहितको संबिधानको आवश्यक्ता रहेको छ ।
कलैयालाईभ ः तराई मधेसका पर्यटकीय स्थलको बिकाश कसरी हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
केवट तराई मधेसको पर्यटकीय बिकाशको लागि हामी सबै मधेसबादी राजनीतिक दल, मधेसका बुद्धिजिवि, नागरिक समाज लगायतकाले एक जुट भएर लाग्नुपर्छ । सरकारले कुनै पनि हालतमा मधेसका पर्यटकीय स्थलको बिकाश गर्न चाहदैन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो बिश्व प्रसिद्ध गढीमाई, कंकालि माई, गौतम बुद्धको जन्म स्थल लुम्बिनी, सिम्रौनग जस्ता पर्यटकीय स्थलको बिकाशमा प्राथमिक्ता नदिनु हो ।
कलैयालाईभ ः अन्त्य अन्त्यमा तपाई यस पत्रिका मार्फत आम पाठक तथा नेपालीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
केवट म यस बारा जिल्लाबासी सम्पुर्णमा यस वेभसाईट मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु की आफ्नो अधिकार, आफ्नो ठाउँको बिकाश एवं उन्नती गर्नको लागि मधेसीको आवाज एवं मधेसीको पहिचान दिलाउँने पार्टीसंग आब्द भई शसक्त रुपमा अगाडी बढन अनुरोध गर्न चाहन्छु । धन्याबाद ।।।
Chuman Babu BekwatinterviewMadhesi Jana adhikar Forum NepalRam Raja CampusUniversity in Bara
‘माफ गर्नुहोला ! तपाई बाहुन हो, विभेद देख्न सक्नुहुन्न’
राजेन्द्र महतोसँगको अन्तरवार्ताः हामीले दिन सक्ने दिइसक्यौँ, अब प्रतीक्षामा छौं